How to migrate AD Services Server 2003 to Server 2008? — MYSTERY ZILLION
How to migrate AD Services Server 2003 to Server 2008?
June 2013 edited June 2013 in Windows Server
တနေ့က youtube မှာ လိုက်မွှေရင်း server 2003 ကနေ server 2008 ကို migrate လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ့လို့ ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကိုလဲ PDFဖိုင်လေးလုပ်ထားတယ်။ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။